Dalxiiska Warshadda - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Aqoon isweydaarsiga weyn ee CFM ee 6000 mitir murabac ah (qiyaastii 65,000 oo laba jibbaaran) aqoon isweydaarsigu wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro ku dhowaad nashqadeyn kasta ama soo bandhig wax soo saar si kaamil ah maxaa yeelay shay kasta waxaa lagu dhammaystiraa kombuyuutarrada ay shaqaaluhu ku shaqeeyaan iyo nidaamka maareynta dhijitaalka ah, iyadoo la hubinayo midaysnaan iyo wax soo saar tayo leh mid kasta iyo mar kasta. .
Si loola socdo baahida, aqoon isweydaarsiga CFM wuxuu adeegsadaa daabacayaal xawaare sare leh, oo soo saari kara celcelis ahaan wax soo saar maalinle ah oo qiyaastii ah 5,000 m2. Mashiinnadu waxay shaqeeyaan 24 saacadood maalintii si loo hubiyo waqtiga hoggaaminta degdegga ah.
Shaqaalaheenna 110-lagu daray ayaa xirfad u leh farsamooyin kala duwan oo daabacan, taas oo macnaheedu yahay inaad gebi ahaanba u qaabeyn karto qalabkaaga xayeysiinta baahiyahaaga. Marka ay timaado sawirada qalafsan iyo sawirada qaraarka sare ama midabka dhiigbaxa, tixgeli daabacaadda dhijitaalka ah. Daabacaadda wareejinta kuleylka sidoo kale waa ikhtiyaar haddii ay jirto baahi sare oo midabyo ah.
Sababtoo ah CFM waxay leedahay waxyaabo badan oo la bixiyo, way fududaan kartaa inaad dareento culeys. Haddii aadan hubin farsamada daabacaadda ama badeecadda kugu habboon, ama haddii aad u baahan tahay caawimaad sameynta astaan ​​ama sawir, nala soo xiriir maanta. Kooxdayada saaxiibtinimada iyo aqoonta leh way ku faraxsan yihiin inay ku caawiyaan.